လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် ထူးခြားသော အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းများ - အပိုင်း (၇) - Myanmar Network
လူနာမည်များကို သုံးထားသည့် ထူးခြားသော အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းများ - အပိုင်း (၇)
Posted by Language Republic on October 20, 2015 at 11:20 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Great Scott ! (ကြီးမြတ်သော စကော့ထ်)
သူခိုးများမှ နိုင်ငံရေးသမားများအဆုံး Great Scott! (ကြီးမြတ်သော စကော့ထ်) ဟူသော အသုံးအနှုန်းထဲမှ Scott (စကော့ထ်) ဆိုသူသည် General Winfield Scott ( 1786-1866) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝင်းဖီးလ် စကော့(ထ်) (၁၇၈၆-၁၈၆၆) ဆိုသူတစ်ဦးကို ရည်ညွှန်းကြောင်း ယုံကြည်ကြပါသည်။ သူသည် (၁၈၄၁- ၁၈၆၁) ခုနှစ်အကြား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်၏ အမိန့်ပေးခွင့်အာဏာရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်ပြီး၊ (တိုးတက်မှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တို့ကို ထောက်ခံသော) Whig party (ဝှစ်ဂ် ပါတီ) ၏ ၁၈၅၂-ခု အတွက် သမ္မတလောင်းလျာထားခံသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၁၈၄၆ မှ ၁၈၄၈ ခုနှစ်ထိ ဆင်နွဲခဲ့သော မက္ကဆီကန်- အမေရိကန်စစ်ပွဲတွင် သူ၏ ပါဝင်စွမ်းဆောင်ခဲ့မှုကဏ္ဍအတွက် ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသည့် အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုတွင် လူကြိုက်များသည့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤစကားလုံးစု၏ မူရင်းဇစ်မြစ် ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ် အခြားယူဆချက်များလည်း ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် နာမည်ကြီး ဝတ္တုရေးဆရာကြီး Walter Scott (ဝဲလ်တာစကော့) လည်းပါဝင်ပါသည်။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Winfield (ဝင်းဖီးလ်ဒ်)က ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ရပါသည်။ Great God ! (ကြီးမြတ်သော ဘုရားသခင်!) (မြန်မာလို - အမလေး ဘုရားရေ !) ဟူ၍ အာမေဋိတ်သံမျိုးပြုရာတွင် ပိုမိုနားထောင်ကောင်းစေမည့် Great Scott ! (ကြီးမြတ် သော စကော့ထ်) အား ပြောင်းလဲသုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟု လူကြိုက်များသည် ယူဆချက်မှာလည်း Scott (စကော့ထ်) နှင့် God (ဂေါ့ဒ်) ဆိုသောစကားလုံးတို့၏ ကာရန်တစ်ဝက်ကိုက်ညီနေသောအချက်က ကူညီပေးနေခြင်းဖြစ်မည်မှာ သံသယဖြစ် ဖွယ်မရှိပါ။
Permalink Reply by Phyoe Ko on October 20, 2015 at 15:05
Permalink Reply by wahwahtun on October 20, 2015 at 15:55
Permalink Reply by arkarhein on October 21, 2015 at 13:05
Yes, I like .